Ny Real Racing 3 dia efa manana maody marobe amin'ny fotoana tena izy | Vaovao IPhone
Mbola mila miresaka momba ny Real Racing 3 isika, ity lalao fiara mihazakazaka mahatalanjona avy amin'ny Electronics Arts. Ireo mpampiasa ity lalao ity dia tsy afaka mitaraina momba ireo fanavaozana mitohy izay mahazatra antsika.
Ny antony rehetra dia tsara ny manavao ny fampiharana: ampio làlana vaovao, fiara, fahatsiarovana ny 50 taona Porsche ... Amin'ity fanavaozana ity dia misy zava-baovao mahaliana: ny maody multiplayer amin'ny fotoana tena izy amin'ny alàlan'ny Game Center aorian'ny fitaky ny fangatahan'ny mpampiasa. Miaraka amin'ny maody multiplayer vaovao ahafahantsika mifaninana hatramin'ny namana efatra na mpifaninana amin'ny tena izy.
Manararaotra ny fanavaozana hanampiana ny maody marobe amin'ny fotoana tena izy, supercars McLaren P1 sy Lamborghini Veneno maromaro no nampiana, miaraka aminy izay totalin'ny fiara izay azontsika ampiasaina amin'ity lalao ity dia mahatratra hatrany amin'ny 81.
Niampy a andiam-pitsapana vaovao antsoina hoe Summit, izay hifaninananan'ireo supercars amin'ny hazakazaka amboara epic izay miorina anaty tantara lalina.
Momba ny fiasan'ny lalao Namboarina fakan-tsary famerenana imbetsaka, nanala sakana tao Hockenheimring, ary ny fampiasana namboarina mandritra ny fitsapana ara-potoana.
Misy ny fampiharana ho alaina ao amin'ny App Store maimaim-poana. Ny fividianana rindrambaiko ao anaty fampiharana dia misy handroso haingana kokoa. Raha tsy te hividy fividianana rindrambaiko ianao dia azonao atao ny manafoana ny fividianana rindrambaiko ao anaty fikiranao iDevice.
Raha tsy mitondra fiara amin'ny boriborintany tena izy, aleonao mifaninana amin'ny sehatra exotic, manao stunt aerial amin'ny hafainganam-pandeha tsy mampino, azonao atao ny misafidy ny manandrana Asphalt 8: Airborne koa azo alaina maimaimpoana amin'ny fividianana fampiharana. Ao amin'ny Asphalt 8 ianao dia afaka mitondra fiara mitovy amin'ny an'i Lamborghini Veneno, Bugatti Veyron, Ferrari FXX ary Pagani Zonda R.
Real Racing 3maimaim-poana
Asphalt 8: Lalao tena hazakazakamaimaim-poana
Fantaro bebe kokoa - Ny Real Racing 3 dia nahazo fanavaozana mankalaza ny 50 taona Porsche
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny Real Racing 3 dia efa manana maody marobe amin'ny fotoana tena izy
Lazainay anao hoe manao ahoana ny Spigen Neo Hybrid ho an'ny iPhone 5 / 5s
Olloclip dia mandefa lantiro 3-in-1 ho an'ny iPhone 5C